United Airlines inoronga yakakura kwazvo purogiramu yemumba kubva munaKurume 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines inoronga yakakura kwazvo purogiramu yemumba kubva munaKurume 2020
Ndege inobhururuka mazana matatu nemazana mashanu ezuva nezuva nendege muna Zvita - yakanyanya kubvira kutanga kwedenda uye 3,500% yaro Zvita 91 purogiramu yemumba - kutsigira kutarisirwa kwakatarisirwa mukuda kwekufamba kwezororo.
Zvita yaDecember inosanganisira hukama hutsva pakati peMidwest uye inodziya mamiriro ekunze seLas Vegas neOrlando.
Chirongwa chitsva chinosanganisira dzinosvika makumi manomwe ezuva nezuva nendege dzinoenda kunzvimbo dzekumusoro, kusanganisira sevhisi nyowani pakati peOrange County neAspen.
Sekureva kweUnited Airlines, kutsvaga kwekufamba kwezororo pawebhusaiti yeUnited uye iyo ndege yendege yakwira 16%, zvichienzaniswa ne2019.
United Airlines nhasi yazivisa kuti ichaburitsa hurongwa hwayo hukuru kubva pakatanga denda kusangana nezvinotarisirwa mukufamba kwezororo, nekusimbisa kubatanidza Midwest kumaguta anodziya mamiriro ekunze seLas Vegas neOrlando pamwe nekupa vangangoita makumi manomwe ezuva nezuva. ndege kuenda kunzvimbo dzekumusoro, kusanganisira sevhisi nyowani pakati peOrange County neAspen.
Maererano ne United Airlines, zororo rekufamba nendege kutsvaga pauni.com uye iyo ndege yendege yakwira 16%, zvichienzaniswa na2019.Yendege inotarisira mazuva ekufamba zvakanyanya kuzororo reKutenda ichave Chitatu, Mbudzi 24 neSvondo, Mbudzi 28, nepo mazuva akakurumbira echando kufamba kwezororo kunotarisirwa kuve China, Zvita 23 uye Svondo, Ndira 2.
Ndege inoronga kupa dzinopfuura zviuru mazana matatu nemazana mashanu dzendege dzepamusha muna Zvita, inomiririra 3,500% yemahombekombe emumba achienzaniswa ne91.
"Tiri kuona kuwanda kwepent-up kudhara yedu uye tiri kupa chirongwa cheDecember icho chinoisa pazvinhu zviviri izvo vanhu vanonyanya kuda pazororo: kudziya kwezuva uye chando chitsva," akadaro Ankit Gupta, mutevedzeri wemutungamiriri wezvekuronga network uye kuronga pa United Airlines. "Tinoziva mhuri neshamwari vane shungu dzekubatanidza mwaka uno wezororo, ndosaka tiri kufara kuwedzera ndege itsva dzinovabatsira kubatana nekupembera pamwechete."
Muna Zvita, United ichatanga nendege dzakananga dzinoenda ku Las Vegas uye Phoenix kubva kuCleveland, uye kusvika Orlando kubva Indianapolis. Mutakuri anotangazve nendege sere dzakakurumbira kubva kuMidwest maguta, kusanganisira nzira dzinoenda kuFort Lauderdale, Fort Myers, Orlando neTampa, zvichipa kuenda kwakawanda kwendege kubva kuCleveland kubvira 2014 kusanganisira kunanga kuNassau neCancun. United ichapa kusvika ku195 nendege dzezuva nezuva kuenda kunzvimbo gumi nembiri muFlorida munguva ino yechando, ndege dzakanyanya kuenda kuSunshine State munhoroondo yekambani. United iri kutangazve nendege dzakananga kubva kuColumbus, Indianapolis, Milwaukee nePittsburgh kuenda kuFort Myers - dzaive dzimwe dzendege dzinozivikanwa kwazvo nendege-ku-nhanho nguva yechando yapfuura.
Vatengi vanosarudza hupfu hwakatsetseka vanogona kunakidzwa nendege dzinoenda kunzvimbo dzekubhururuka neUnited kupfuura chero mutakuri. Iyo yendege inopa ndege dzezuva nezuva makumi matanhatu nenhanhatu kuenda kunzvimbo dzinopfuura gumi nemaviri dzechikepe kuyambuka US, kusanganisira brand new service kutanga munaZvita pakati peOrange County neAspen. Mwaka uno wechando, United ichave neendege kuAspen / Snowmass, Mammoth, Bozeman / Big Sky, Eagle / Vail, Kalispell, Gunnison / Crested Butte, Hayden / Steamboat Springs, Jackson Hole, Montrose / Telluride, Reno / Tahoe, Sun Valley kubva nhandare yayo yemahombekombe.